Oprah Winfrey iyo Prince Harry oo Caafimaadka Maskaxda u keenay Apple TV + Dabayaaqadii May | Waxaan ka socdaa mac
Lagu shaaciyey 2019 iyada oo loo marayo Instagram iyo kadib daahitaan wax soo saar ugu dambayntiina waxa laga sii deyn doonaa Apple TV + Meey dhexdeeda. Siideynta ayaa la xaqiijiyay intii lagu jiray wareysiga Oprah ee Drew Barrymore Show. Ma ahayn wax soosaarka kaliya ee dib loo dhigay sababo la xiriira faafida, laakiin waa run in qabashada hordhaca ay aad u dhowdahay, waxyaabo badan ayaa maskaxdaada ku soo dhaca, gaar ahaan xaalada haatan ee Príncipe oo ugu yaraan aan ku qeexi karno inay tahay mid dhexdhexaad ah.
Bishii Abriil 2019, wada shaqeynta Prince Harry ee Oprah iyo Apple TV + si loo abuuro taxane ku saabsan ceebta dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda. Ku dhawaaqida taxanahan waxaa amiirradu ku sameeyeen bartooda Instagram, oo ah taxane dokumenti ah oo wax ka qaban doona dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee adduunka oo dhan, ma ahan oo keliya Boqortooyada Ingiriiska. Wareysi ay la yeelatay barnaamijka 'The Drew Barrymore Show' oo ay la yeelatay Oprah, ayay ku xaqiijisay in hordhaca uu noqon doono dhamaadka bisha May.
Taxanaha taxanaha ah ee taxanaha ah ee firfircoon wuxuu diirada saari doonaa jirrooyinka maskaxda iyo ladnaanta maskaxda. Waxay isku dayi doontaa inay ku dhiirrigeliso daawadayaasha inay yeeshaan wada hadal daacad ah oo ku saabsan caqabadaha qof kasta oo naga mid ah wajahaya. Iskusoo wada duuboo, sida loogu qalabeeyo nafteena aaladaha aan si fudud u badbaadin, laakiin aan u si ay u barwaaqoobaan.
Waxay umuuqataa mid wanaagsan oo hordhaca taxanaha wuxuu dhacaa waqti aad loo sugo. Iyadoo lagu xisaabtamayo in aafada kaliya aysan keenin dhibaato caafimaad iyo mid dhaqaale, laakiin sidoo kale mid bulsho. Xidhiidhka ka dhexeeya dadka ayaa yaraaday tanina waxay keenaysaa kordhinta feejignaanta xirfadlayaasha caafimaadka maskaxda.
Waa inaan sugnaa dhamaadka Maajo si aan u arko sida taxanahan ay u dhaafaan amiirka warbaahinta iyo Oprah badan
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Oprah Winfrey iyo Prince Harry si ay caafimaadka maskaxda ugu keenaan Apple TV + dabayaaqada Maajo